Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Antacid sy PPI | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Antacid sy PPI | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / Inona no tsy itovizan'ny Antacid sy ny PPI
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny antacid sy PPI dia ny antacid mampihena ny vokatry ny asidra ao amin'ny vavony amin'ny alàlan'ny fanalana ny asidra raha ny proton pump protector (PPI) kosa dia mampihena ny vokatry ny asidra ao amin'ny vavony amin'ny alàlan'ny fampihenana ny famokarana asidra amin'ny vatana.
Ny aretina reflux asidra dia mitranga rehefa miverina ao amin'ny esofagus ny asidra vavony. Manelingelina ny sela izany. Ny aretin'andoha na tsy fihanaky ny asidra dia famantarana ny fihenan'ny asidra. Amin'ity toe-javatra ity dia misy fahatsapana mirehitra izay misy ny esophagus ao ambadiky ny fo. Ny fanafody mihoatra ny kaontera (OTC) dia ny fanafody azon'ny olona vidiana raha tsy misy dokotera dokotera hitsaboana ny aretin'andoha sy ny reflux asidra. Antacid sy PPI dia roa amin'ireo fanafody mpanohitra izay azo ampiasaina hanasitranana ny aretin'andoha sy ny aretina reflux asidra.
2. Inona no atao hoe Antacid
3. Inona no atao hoe PPI
4. Fitoviana - Antacid sy PPI
5. Antacid vs PPI amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe Antacid?
Antacid dia fanafody mampihena ny vokatry ny asidra ao amin'ny vavony amin'ny fanalefahana ny asidra. Izy io dia fanafody mampihena ny asidra vavony. Izy io dia ampiasaina hanamaivanana ny aretin'andoha, tsy fihinanan-kanina, na vavony mankarary. Ny antacid sasany dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fitohanana sy fivalanana. Ny antacid amin'izao fotoana izao dia misy sira misy alimo, calcium, magnesium, na sodium. Indraindray ny fanomanana antacid dia mety misy fitambarana sira roa, toy ny magnesium carbonate sy aluminium hydroxide. Antacids dia misy amin'ny alàlan'ny fanafody mihoatra ny latabatra (OTC), ary mazàna am-bava no anaovana azy. Ny antacid dia miendrika takelaka azo tsakoina, takelaka manalefaka ary ranoka. Ankoatr'izay, afaka manome fanampiana vetivety sy vetivety izy ireo.
Sary 01: Antacid
Rehefa asidra be loatra no vokarina ao an-kibo, dia azo simbaina ny sakana moka voajanahary. Izany dia miteraka fanaintainana, fahasosorana, ary fahasimbana amin'ny esophagus. Ny Antacid dia misy ion ionaly izay mampihena ny asidra gastric vavony amin'ny fomba simika. Mampihena ny fahasimban'ny vavon'ny vavony sy ny atiny esofagus koa izany. Na izany aza, ny antacid dia misy vokany hafa. Ny antacid izay misy sira manezioma dia mety miteraka fivalanana, fa ireo izay misy kalsioma na aliminioma kosa dia mety miteraka fitohanana. Mety hiteraka vato voa sy osteoporose koa izy ireo. Ankoatr'izay, izy ireo dia mifandray matetika amin'ny fanafody hafa toy ny fluoroquinolone, antibiotika tetracycline, vy, itraconazole ary prednisone.
Inona ny PPI?
PPI ( proton pump inhibitor ) dia fanafody mampihena ny vokatry ny asidra ao amin'ny vavony amin'ny fampihenana ny famokarana asidra ao amin'ny vatana. Ity dia kilasin'ny fanafody izay miteraka fihenam-bidy lava sy maharitra amin'ny famokarana asidra vavony. Ny PPI dia tsy mahomby amin'ny fanakanana ny paompy proton H + / K ATPase. Izy io no mpanakana mahery vaika ny tsiranoka asidra ao amin'ny vavony. Ny PPI dia manolo ny hetsiky ny mpanohitra mpandray H2, izay kilasin'ny fanafody iray hafa misy vokany mitovy amin'izany. Ny mpanohitra paompy proton dia iray amin'ireo fanafody be mpividy indrindra amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao.
Sary 02: PP1
Ity fanafody ity dia ampiasaina hitsaboana dispepsia, fery amin'ny peptic, aretin'ny reflux gastroesophageal, esophagus an'i Barrett, esophagus eosinophilic, gastritis amin'ny stress, ary gastrinomas. Ankoatr'izay, ny voka-dratsin'ny fampiasana PPI dia ny aretin'andoha, maloiloy, fivalanana, fanaintainan'ny kibo, havizanana, havizanana, fanina, mangidihidy, fivontosana, fitohanana, fitaintainana, fahaketrahana, myopathies, ary rhabdomyolysis. Ny mpanakana paompy proton ampiasaina dia ny Omeprazole, lansoprazole, dexlansoprazole, esomeprazole, pantoprazole, rabeprazole, iiaprazole, sns.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny Antacid sy PPI?
Antacid sy PPI dia fanafody roa ampiasaina hitsaboana ny asidra vavony.
Ireo fanafody roa ireo dia azo vidiana toy ny amin'ny fanafody.
Ireo fanafody ireo dia azo ampiasaina hampihenana ny aretin'andoha sy ny aretina amin'ny reflux asidra.
Izy roa ireo no fanafody be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Antacid sy PPI?
Ny Antacid dia mampihena ny vokatry ny asidra ao amin'ny vavony amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny asidra, fa ny PPI kosa dia mampihena ny vokatry ny asidra ao amin'ny vavony amin'ny fampihenana ny famokarana asidra ao amin'ny vatana. Ka io no mampiavaka ny antacid sy ny PPI. Antacid dia manome fanamaivanana vetivety amin'ny asidra vavony, raha PPI kosa manome fanampiana maharitra amin'ny asidin'ny vavony.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ny fahasamihafana misy eo amin'ny antacid sy PPI amin'ny endrika tabilaoro raha ampitahaina.
Famintinana - Antacid vs PPI
Ny fanafody mihoatra ny kaontera (OTC) toy ny antacid sy PPI no fanafody azon'ny olona ampiasaina hitsaboana ny aretin'andoha sy ny reflux asidra. Ny Antacid dia mampihena ny vokatry ny asidra ao amin'ny vavony amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny asidra, fa ny PPI kosa dia mampihena ny vokatry ny asidra ao amin'ny vavony amin'ny fampihenana ny famokarana asidra ao amin'ny vatana. Noho izany, ity no fahasamihafana lehibe eo amin'ny antacid sy PPI.
Fanamarihana: Ity lahatsoratra ity dia natao ho an'ny fampahalalana fotsiny ary ny zava-mahadomelina dia tsy tokony entina raha tsy misy dokotera.
1. " Torolàlana mialoha ary aza mamelombelona ny baiko ." Familydoctor.org, 11 Jona 2020.
2. Knott, Dr Laurence. " Inhibitors Pump Proton: fampahalalana, ohatra ary vokany hafa ." Patient.info, 19 martsa 2020.
1. " Antacid-L478 " Nosoratan'i Midnightcomm - Asa manokana (CC BY 2.5) avy amin'ny Wikimedia Commons
2. " Mekanisme inhibitors pump proton " Nosoratan'i Anypodetos - Asa manokana, mifototra amin'ny File: protonation2.Ip2.PI and Mutschler, E. Schäfer-Korting, M. (2001) (amin'ny teny alemà) Arzneimittelwirkungen (fanontana faha-8), Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, p. 639 ISBN: 3-8047-1763-2. (CC0) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Cytoplasm sy ny Protoplasm Fahasamihafana eo amin'ny Locomotion sy ny hetsika Fahasamihafana eo amin'ny Lymphocyte sy Lymphoblast Fahasamihafana eo amin'ny fanomezana IVF sy ZIFT Fahasamihafana eo amin'ny Fibrin sy Slough
Fahasamihafana eo amin'ny klôro sy klôroida
Fahasamihafana eo amin'ny Ethnography sy Ethnology
Fahasamihafana eo amin'ny dingana Reverse sy HPLC dingana mahazatra
Fahasamihafana eo amin'ny mineraly sy ny metaly
Fahasamihafana eo amin'ny maritiora sy ny famonoan-tena